असार ९ देखि दुबई–काठमाण्डौ उडान भर्ने, टिकट मूल्य यति ? – Sandesh Press
असार ९ देखि दुबई–काठमाण्डौ उडान भर्ने, टिकट मूल्य यति ?
June 19, 2021 545
असार काठमाडौ नेपाल एयरलाइन्सले आगामी जुन २३ देखि दुबई–काठमाण्डौको एकतर्फी उडान सुरु गर्दै छ । नेपाल सरकारले कोरोना महामारीको कारण यूएईमा रोकिएका श्रमिकलाई उद्दार गर्ने उदेश्यले उडान भर्न लागेको हो ।
युएई उडान सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारको लागि रोकिएका तथा भिजिट भिसामा जानको लागि पर्खाईमा रहेकाहरुले भने युएईका उडानमा युएई जान सक्दैनन्। नेपालमा कोरोना महामारी बढेको कारण युएई सरकारले नेपाललाई युएई जान रोकेको कारण नेपालीहरु युएई जान नपाउने भएका हुन् ।
नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार युएईबाट हुने उद्दार उडान असार ९ गते र असार १६ गतेको लागि तय भएको छ । उडान एकातर्फी भएकाले युएईबाट नेपाल आउनेहरुले महँगो टिकट काट्नुपर्ने भएको छ । युएईबाट नेपाल आउनको लागि टिकट मूल्य करिव ५० हजारको हाराहारीमा छ ।
Prevसबिता भण्डारी प्रकरणबारे अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कर्किले गरे ड रला ग्दो खुलाशा,छोरा को सँग बस्छ ?(भिडियो सहित)
Nextटिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सञ्चारकर्मीको मृत्यु
संगै जिउने सपना सजाएका यि प्रेमिल जोडीको बन्यो एउटै चिता, शोकमा डुवेको गाउँमा धेरैको घरमा चुलो बलेन